Apple iPhone yokuthengisa Flatline njengesikhathi sokukhula ewela kahle short okulindelwe - Izindaba Rule
Apple iPhone yokuthengisa Flatline njengesikhathi sokukhula ewela kahle short okulindelwe
Ukudayiswa idivayisi yayo top-abathengisayo landa ngamaphesenti kuphela 0.4% kwalo njengoba kuza amaholidi, kuqhathaniswa ne 46% phezu ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule, kodwa izikhala inkampani irekhodi izimali
Lesi sihloko osesikhundleni “Apple iPhone yokuthengisa Flatline njengesikhathi sokukhula ewela kahle short okulindelwe” lalotshwa Sam Thielman eNew York, The Guardian ngoLwesibili 26 January 2016 21.49 UTC
Apple iPhone yokuthengisa flatlining, inkampani tech kusho umbiko ngoLwesibili, njengoba umemezele Ukwehla elibukhali yokuthengisa ukukhula idivayisi yayo top-ukuthengisa mobile.
Le nkampani bathengisa 74.8m kwamadivaysi yayo iwuhlelo kowamanqamu izinyanga ezintathu 2015, ingaphasi kwaloko lokulindzelwe Abahlaziyi '. Esikhathini nenani lesikhathi esifanayo ngo 2014 inkampani bathengisa 74.46m iPhones, yokuthengisa okusho ngokuyinhloko kwakuyinkathi flat.
Sales of the akhawunti iPhone for abangaba izingxenye ezimbili kwezintathu zayo yonke imali etholwa Apple, okuyinto ekhathaza abanye abatshalizimali. "Apple inkampani eyodwa-product,"Wamemezela Berenberg sika Adnaand Ahmad ngonyaka odlule, lapho ibhange German behliselwe phansi impahla yenkampani ukuze 'ukudayisa ".
Apple posted irekhodi enzuzweni kwanezelwa $ 75.9bn futhi inzuzo irekhodi kwanezelwa $ 18.4bn, kodwa waxwayisa izimali ziyowa lokhu ikota.
Chief executive officer Tim Cook wathi: "Isikhundla sethu sezimali akakaze kunamandla." Wathi Apple kwadingeka 'ungunina wabo bonke amashidi balance "izimpahla engamaphesenti $ 293bn, nge $ 205bn yalowo ngokheshi. Wanezela ukuthi inkampani Njengamanje lamadivayisi 1bn asebenzayo - yipumelelo ekulu, uthe.
Kanye ekunqandeni iPhone yokuthengisa Apple kusho umbiko bathengisa iPads ezimbalwa kakhulu kule nezinyanga zokugcina ezintathu 2015, 16.1m, wehla evela amaphilisi 21.4m ngekota esifanayo ngonyaka odlule. Mac yokuthengisa, kakhulu, elalingasebenzi, Nokho kancane kakhulu: inkampani bathengisa 4% okumbalwa, for ingqikithi 5.3M.
Izimali at "kwezinye imikhiqizo" isigaba salo, okubandakanya Apple Watch, lakhula kakhulu ku- $ 4.4bn, uSolomoni wayikhuphula wayikhipha $ 2.6bn ngekota yesithathu ka 2015 (lapho inkampani wokuqala owabikwa Buka ngokuhamba yokuthengisa). imikhiqizo zemininingwane esigabeni zihlanganisa Beats izesekeli, Apple Pay and Apple TV.
I Ukwehla yokuthengisa mobile abutholakali Apple. Worldwide smartphone ukukhula elinciphile rate yalo ephansi impela selokhu 2013, ngokocwaningo aqine Gartner, kodwa izibonakaliso ukuthi abathengi bangase babe kuyakhathaza iterations entsha ye-iPhone, ingase ibe nethonya elinamandla endleleni Apple futhi abantu abaningi US stock market.
Njengoba Apple wangena smartphone emakethe ngekota yesithathu ka 2007, inkampani sekudayiswe 821m iPhones. Ukudayiswa iPhones baye ibutho eliyisisekelo ngemuva kokwenza Apple inkampani enkulu kunazo zonke emhlabeni.
Esikhathini esidlule ayisishiyagalombili nengxenye edlule, the giant tech nayo yashaywa indiva emakethe mobile, ngilichitha kwaze BlackBerry ke-ephezulu kanye nokuphoqa yonke imboni nibhekane nazo emisha like a esibonakalayo zokuthinta isikrini, impendulo Haptic futhi adidiyele umculo esitolo.
Le nkampani enkulu kangaka qophelo lapho Apple iya, emakethe yamasheya okuvame - futhi Apple amasheya ehla. "Apple licishe 7% the S Imininingwane&P 500 Amaholo,"Kusho Angelo Zino S&P Capital IQ. "Kuzoba nomthelela omkhulu hhayi kuphela Apple kodwa ngenxa Apple supply chain. Lokho 7% inombolo nje Apple. Kunezindlela eziningi nezinye izinkampani like Best Buy ukuthi uboshelwe kubo. "
Nakuba iPhone bekulokhu nempumelelo, Apple uye kwadingeka inhlanhla kancane imikhiqizo yayo entsha. Ukudayiswa iPads iye yabhuntsha kanti Apple Watch nokho ukufakazela mass ngemakethe yalo isikhalazo.
Steve Jobs uphakamisa iPhone okokuqala ngo-January 2007. Photograph: UPawulu Sakuma / AP
Akekho Ubala Apple out, kodwa izindaba ubeka ingcindezi omkhulukazi on Cook ukuze uqiniseke ukuthi iPhone 7 has a DEBUT yimpumelelo kamuva e 2016. "Ngisho nge phutha noma isiqondiso ephansi, the stock unakho ngisho ukudayisa ephakeme,"Zino kusho. "Sizobona; abantu abayibuzayo uma lena isiqongo iPhone yokuthengisa, futhi ngithi cha. "
isingeniso yenkampani iPhone 6 Plus unyaka ngaphambili kwenza iziqhathaniso bheka dire ikakhulukazi; Zino wathi emakethe kanye namabhizinisi Apple ezihlobene alindele Rebound - bese ezinye - kusukela isimemezelo iPhone 7.
23102	0 I-Apula, Isigaba, Business, Financial, iPhone, kwesigaba Main, Omakhalekhukhwini, Izindaba, Quarterly results, Sam Thielman, Smartphones, Technology, The Guardian
← 10 Izinto ningamazi Babies angenta [Listverse] The 6 Foods Dangerous Iningi →